Kibaki oo magacaabay taliye xigeenka AMISOM - Sabahionline.com
Kibaki oo magacaabay taliye xigeenka AMISOM Abriil 11, 2012
Madaxweyneha Kenya Mwai Kibaki ayaa Talaadadii (10-ka April) Sarreeye Gaas S. N. Karanya u magacaabay in uu noqdo taliye ku xigeenka hawlgallada ee ciidamada AMISOM, magacaabistaa oo sugi doonta in ay aqbalaan Golaha Midowga Afrika (MA), The Standard oo Kenya ka soo baxda ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
Kenya oo 850 askari oo kuweeda ah ka celinaysa Soomaaliya
Kenya oo diidday in ay wadahadal la gasho af-duubayaasha al-Shabaab
Dallicinta Kibaki ee Karanya ayaa timid ka dib markii ay Golaha Difaacu ku talo-bixiyeen in la magacaabo, waxayna u badan tahay in ay MA iyaguna aqbali doonaan magacaabidda toddobaadkan, ayay jariidaddu werisay. Sidoo kale, Talaadadii waxa uu Kibaki manaasib sare u dallacsiiyey in ka badan darsin saraakiil ah. Sarreeye Guuto J. K. Rono waxaa laga dhigay Sarreeye Gaas waxaana loo magacaabay in uu noqdo sarkaalka guud ee u taliya Taliska Bari. Gaashaanle Sare J.L. Mrashui oo ahaa caawiye u dhaw Kibaki ayaa isagana waxaa loo dallacsiiyey sarreeye guuto waxaana loo magacaabay madaxda shaqaalaha ciidanka ah. Muxuu kula yahay qoraalkan?